Farfalla FAC-ZS928 Air-Cooler (70 Watts) | Buy online | SHOP.COM.MM
၇ နာရီ မိနစ် ၃၀ Timer
၁၁ လီတာခန့် ရေလှောင်နိုင်ခြင်း။
Farfalla air cooler က လေတိုက်နှုန်းလည်း မြန်တယ်။ မီးအားစားလည်း သက်သာတယ်။ Read more Hide
ဆိုင်မှာသုံးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။ အတော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ အဲကွန်းနီးပါးအေးပြီး အဲကွန်းလောက်ဈေးမကြီးလို့ အဆင်ပြေတယ်။ Read more Hide
Farfalla Air Cooler reduces the room temperature fast because it is equipped bee-shapes evaporation device. It can speed up to 3steps for warm and wet weather. Home or office use will be convenient for we can change the temperature by remote control.
Specifications of FAC-ZS928 Air-Cooler (70 Watts)